Qorshaha gargaarka ee abaaraha Bolivia | Saadaasha Shabakadda
Isbedelka Cimilada ayaa sii kordheysa soo noqnoqoshada iyo xoojinta abaaraha adduunka oo idil. Bolivia, ilaha biyaha waa ku yar yihiin waana taas sababta ay u bilaabayaan inay horumariyaan mashaariic gargaar oo loogu tala galay keydinta biyaha iyo waraabka oo abaarta abaarta.
Abaarta ka jirta Bolivia waa tii ugu darneyd 25-kii sano ee la soo dhaafay. Mashaariic noocee ah ayaa jirta si loo yareeyo dhibaatooyinka abaaraha?
Mashruuca NGO Ayuda en Acción (AA) wuxuu isku dayayaa inuu yareeyo dhibaatooyinka abaaraha ee Bolivia wuxuuna helay Abaalmarinta Caalamiga ah ee Iskaashiga iyo Horumarinta, ee daabacaadda sanadkan ee abaalmarinta José Entrecanales Ibarra.
Madaxa Xiriirka Hay'adaha AA, Marta Marañón, waa midka ku soo uruuriyay abaalmarinta ficil uu horay u gudoomiyay King Felipe VI. Sababta abaalmarinta ayaa ah shaqadii weyneyd ee laga qabtay mashruucan sanadkaan 2016 oo dhan gobolka Andean Azurduy. Ururka Ayuda en Acción wuxuu bixiyaa caawinaad si loo dhiso biyo xireen ka caawiya inuu xajiyo oo keydiyo biyaha ka hortaga abaaraha. Dheeraad ah, Waxay ku guuleysteen inay caawiyaan 15 wadiiqooyin colinar ah iyo 30 balli oo sibidhka ah oo durba biyo siiya 2.000 oo qof oo deggan aaggaas.
Mashaariic badan oo laga qabtay aaggan ayaa fashilmay kadib markii la dhammeeyo maxaa yeelay lama sii wadi karo. Si kastaba ha noqotee, mashruucani wuu sii socon doonaa tan iyo markii bulshada Bolivia ay tahay tii ka qayb qaadatay horumarinta kaabayaasha bilowgii. Tani waxay muujineysaa inay iyagu noqon doonaan kuwa si adag uga shaqeyn doona ilaalinta kaabayaasha iyo hubinta fayoobaantooda.
Waa isbeddelka cimilada ee sababaya abaaro sii kordhaya iyo kaydinta biyaha ee dalal badan oo adduunka ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Dhacdooyinka saadaasha hawada » Abaaraha » Qorshaha gargaarka ee abaaraha Bolivia
63 Mashaariicda Cimilada ayaa la soo bandhigay si loo yareeyo qiiqa
Febraayo 2017: ka diirran oo ka qoyaan badan sidii caadiga ahayd